I-Cutter Dredge Isetshenziselwa Ukuvikela Ulwandle lwaseKeta eGhana - i-Ellicott Dredges
IGreat Lakes Dredge & Dock Usees Ellicott® Brand Cutter Dredge yeKeta Sea Defense eGhana, e-Afrika
I-18 intshi (457 mm) i-Ellicott®brand cutter suction dredge "Alabama" iqala ukusebenza kuKeta Sea Defense Project
Source: Indaba Eyisembozo Yezimayini Zokwakhiwa Kwezakhiwo Zomhlaba Nokwakhiwa
I-18 inch (457 mm) uhlobo lwe-Ellicott® umsiki wokusika "I-Alabama" iqala ukusebenza kuKeta Sea Defense Project
IKeta Lagoon ingumzimba omkhulu wamanzi angenasawoti ohlukaniswe namanzi anosawoti eGulf of Guinea ngomugqa omncane womhlaba. Le isthmus ibhekana nokuguguleka okukhulu futhi okuqhubekayo. Ingxenye enkulu yengqalasizinda yokuhlala neyomphakathi esigodini saseKeta, kubandakanya nomgwaqo oyixhumanisa nomakhelwane basenyakatho, ilahlekile olwandle. Ukwelulwa komhlaba phakathi kweKeta neKedzie kuguguleka ngesilinganiso esisuka ku-4.0 kuye ku-8.0 m / ngonyaka futhi manje sesingaphansi kwamamitha angama-50 ububanzi kwezinye izindawo. Ukube lesi siqephu somhlaba besingaphulwa ulwandle, izinguquko ezinobungozi kasawoti nokugeleza ngaphakathi echibini bekungenzeka, kube nemiphumela emibi kakhulu kwezolimo zasendaweni, izimboni zokudoba, ezentengiselwano, nezimo zansuku zonke zalabo abahlala eKeta , Vodza, Kedzie, nendawo ezungezile. Ngendlela efanayo, uma uMfula omkhulu iVolta uvuvuka ngesikhathi semvula, izikhukhula nazo zingabeka izinsongo ezinkulu ebuqothweni bendawo enamanzi ahlanzekile entekenteke. Isifunda i-Avu-Keta siziphilisa echibini: ukugcinwa kwaso kuyisinyathelo sokuqala esibalulekile ekuqalisweni kabusha kwentuthuko yezenhlalo nezomnotho. UMnyango Wezemisebenzi kanye Nezezindlu weRiphabhlikhi yaseGhana wafuna ukwenza lokhu kulondolozwa ngokuvikela nokuqinisa uzinzo lolwandle olusuka eKeta luye eHlorve, kusebenze iphrojekthi yokhiye wokujika ukuklama nokwakha ukuthuthuka okudingekayo. Izinhloso zalolu hlelo ukuvimbela ukuguguleka kogu okungapheli kanye nezikhathi ezithile kanye nezikhukhula, ukubuyisa umhlaba ovela echibini ukukhulisa izindawo zedolobha nezindawo zasemakhaya, nokuxhumanisa iKeta neHlorve nomgwaqo ongamakhilomitha ayi-8.3 ubude. Ukufika esixazululweni esikahle amaGreat Lakes aqhuba uchungechunge lwezifundo nohlolo, olwangena ohlelweni olukhulu lokukhiqiza isisombululo esonga imali, esinemvelo. Inqubo yokukhetha ibheke imiphumela yezivivinyo zezibalo kanye ne-hydraulic, ukusebenza kahle kwesakhiwo, ukuqina, ukugcinwa, ukuguquguquka, kanye nezemvelo, ezemvelo nezenhlalo. Lezi zifundo zenziwa ngamaGreat Lakes nosonkontileka abangaphansi kwawo iBaird & Associates kanye noHlelo Lokuhlela Nentuthuko. Iphrojekthi Yezokuvikela Yasolwandle yaseKeta inezinto ezine zokwakha / zokwakha:
Ukwakhiwa komgwaqo / umgwaqo we-8.3-km / phakathi komgwaqo iKeta neHlorve, ukwakha isixhumanisi esilahlekile ukuguguleka. Ukuvikela oLwandle kusebenza ukunciphisa ukukhukhumala ngokuqinisa ugu lolwandle ngomkhumbi owodwa olwandle nonxweme olugudle izindwani eziyisikhombisa, ulwandle olondlayo kanye nokondliwa kwasolwandle okubekwe phakathi kwezindawo ezigudle ulwandle kusuka eKeta kuye eHlorve. Ukwakhiwa kwesakhiwo sokulawula izikhukhula ukuhlinzeka izakhamizi eziseduzane nasolwandle ngokukhululeka ezimweni zezikhukhula. Ukulungiswa komhlaba kabusha kusuka endaweni yokugcwala endaweni yaseKeta, eVodzweni naseKedzi, kuhlinzeka ngezindawo lapho kwakhiwa khona kabusha amabhizinisi nezamabhizinisi.
Le phrojekthi igqugquzela ukuvikelwa kwemvelo ngokusetshenziswa okuqhubekayo futhi ikhuthaza ukusebenzisana kwezenhlalo nakwezomnotho nokukhula. Ukwenza isibonelo, kuzokwengezwa insimu yezolimo, futhi umgwaqo / umzila uhlinzeka futhi uvule indlela yokuhamba kwezimoto eziya eTogo nasezigodini ezingasogwini zaseGhanian, amadolobhana kanye nemizana, ukuhlinzeka abalimi namanye amabhizinisi endaweni ukufinyelela ezimakethe. Amabhishi amasha kanye nezindawo zokugcwala izindunduma kuzokwakha izindawo ezivikelekile lapho abadobi bezokwethula khona izikebhe zabo, futhi banikeze ikhaya elivikelekile embonini yokudoba esekwe ogwini. Ukusizakala kwezikhukhula kuzonciphisa ukulahleka kwabalimi ngenxa yezikhukhula zamachibi, futhi umhlaba othengiwe uzohlinzeka ngezindawo ezintsha zokwakhiwa kwamakhaya, amabhizinisi kanye nemiphakathi.
Ekugcineni, iKeta Sea Defense Project iletha ukubakhona kwezentengiselwano okwakhayo kwaseMelika emnothweni waseNtshonalanga Afrika, okwakha ukuthengwa kwezimpahla nezinsizakalo zase-US okungaphezu kwe-US $ 75,000,000. Ama-Great Lakes asize ekuhleleni ngezimali zephrojekthi ne-US Eximbank.
Ukudonswa kanye neQuarry Work Start Keta Sea Defense
I-18 intshi (457 mm) cutter suction (Al )ama "Alabama", eyakhiwe yi-Ellicott® International, iqale ukusebenza eKeta Sea Defense Project ngomhla ka-30 Meyi 2000, ikhumula impahla ethambile engafaneleki ekweqa isihlabathi sokubolekwa esizayo futhi ikhiphe ukudala isiqhingi esiseduze izindawo zezinyoni. IGreat Lakes iphinde yafaka kabusha i- "Alabama" ngama-boom amasha aqhamuka kwa-Ellicott® International ukwenza ngcono ukusebenza kwayo. Lapho indawo eyanele yendawo ebolekiwe isisusiwe, i- "Alabama" izoqala ukudonsa ukugcwala komgwaqo omkhulu. Ukugqugquzelwa kwemishini esindayo yomphakathi kanye nenkwali yezinkwali iyaqhubeka, kanti ukuthunyelwa kokugcina kuzosuka eMelika ngoJuni 21. Ikamu lokuhlala eWeta seliphothuliwe futhi selihlala abantu, kanye namahhovisi esiza ezindaweni zokufika zasolwandle nasehhovisi nasezikhungweni zokulungisa enkwalini . Le misebenzi elandelayo iyaqhubeka:
Ukugqugquzela ama-intshi angama-24 (610 mm) CS dredge "Utah" kulowo ongaphansi komhlaba waseChina uSha He Kou; Ukuthuthwa kwemishini yenkwali evela eHouston naseNewark; Ukuthuthwa komgwaqo kwamaloli angama-777 kanye nama-layisha angama-998 ukusuka eTema kuya enkwalini; Ukuqiniswa kwamapayipi nokuwela umgwaqo emgwaqeni odonsayo; Ukuhlelwa nokugcinwa komgwaqo odonsayo phakathi kwenkwali nendawo okusebenzela kuyo; Uphenyo lwenhlabathi emgwaqeni nasendaweni eseduze yokuboleka indawo yomgodi; Ukususwa komthwalo osindayo enkwalini yokulungiselela itshe lezimayini; Ukwakhiwa kwezindawo zokugcina kanye nezinye izindawo zokulungisa enkwalini yezinsiza kusebenza zomphakathi. Imisebenzi yokumba nokuqhumisa enkwalini izoqala ngoJulayi kuthi kusetshenzwe ngamatshe ngo-Agasti. Ukudonswa kwamatshe ekwakhiweni kweGroyne No. 4 kuzoqala ngoNovemba. -gcina-
Kucashunwe endabeni esembozweni yeWorld Dredging Mining & Construction
Qala Iphrojekthi Yakho Yokuvuselela Ogwini Nge-Ellicott